RoundCoin စျေး - အွန်လိုင်း ROUND ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို RoundCoin (ROUND)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ RoundCoin (ROUND) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ RoundCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ RoundCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
RoundCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
RoundCoinROUND သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0089RoundCoinROUND သို့ ယူရိုEUR€0.00752RoundCoinROUND သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0068RoundCoinROUND သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00809RoundCoinROUND သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0791RoundCoinROUND သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.056RoundCoinROUND သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.196RoundCoinROUND သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.033RoundCoinROUND သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0118RoundCoinROUND သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0124RoundCoinROUND သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.196RoundCoinROUND သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.069RoundCoinROUND သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0483RoundCoinROUND သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.666RoundCoinROUND သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.1.5RoundCoinROUND သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0122RoundCoinROUND သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0136RoundCoinROUND သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.277RoundCoinROUND သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0619RoundCoinROUND သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.949RoundCoinROUND သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩10.57RoundCoinROUND သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦3.44RoundCoinROUND သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.648RoundCoinROUND သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.243
RoundCoinROUND သို့ BitcoinBTC0.0000008 RoundCoinROUND သို့ EthereumETH0.00002 RoundCoinROUND သို့ LitecoinLTC0.000164 RoundCoinROUND သို့ DigitalCashDASH0.0001 RoundCoinROUND သို့ MoneroXMR0.0001 RoundCoinROUND သို့ NxtNXT0.694 RoundCoinROUND သို့ Ethereum ClassicETC0.00131 RoundCoinROUND သို့ DogecoinDOGE2.57 RoundCoinROUND သို့ ZCashZEC0.000108 RoundCoinROUND သို့ BitsharesBTS0.274 RoundCoinROUND သို့ DigiByteDGB0.285 RoundCoinROUND သို့ RippleXRP0.0316 RoundCoinROUND သို့ BitcoinDarkBTCD0.000307 RoundCoinROUND သို့ PeerCoinPPC0.0295 RoundCoinROUND သို့ CraigsCoinCRAIG4.06 RoundCoinROUND သို့ BitstakeXBS0.38 RoundCoinROUND သို့ PayCoinXPY0.155 RoundCoinROUND သို့ ProsperCoinPRC1.12 RoundCoinROUND သို့ YbCoinYBC0.000005 RoundCoinROUND သို့ DarkKushDANK2.86 RoundCoinROUND သို့ GiveCoinGIVE19.28 RoundCoinROUND သို့ KoboCoinKOBO2.03 RoundCoinROUND သို့ DarkTokenDT0.0082 RoundCoinROUND သို့ CETUS CoinCETI25.71